[ 23 febrero, 2019 ] ¿ Puede ser Marc-Aurel Bonne-année el interlocutor válido y hombre de Estado que salveaHaití de la bancarrota ? ကာရစ်ဘီယံ
စတင်ပြုလုပ်ခြင်းယဉျကြေးမှုအက္ခရာများ, epilogues နှင့် epitaphsထွက်. လိုသောမရှိဘဲဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံကနေထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရပါတယ် ...
27, ဇွန်လ 2018 Belz အက္ခရာများ, epilogues နှင့် epitaphs 2
mortification နှင့်ရှေ့ဆက်မျှဝေဖို့တစ်ခုတည်းအငြင်းအခုံအဖြစ် boatman ၏အမှန်တရားတွေမပါဘဲ၎င်းတို့၏ခြေထောက်အကြားကသူတို့ရဲ့အမြီးနှင့်အတူထွက်လာလိုခြင်းမရှိဘဲထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့သည်ကိုယ်လူမှုရေးသို့မဟုတ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုနက်ရှိုင်းသောလက်နက်အားဖြင့်ဖြစ်စေ, ကျွန်ုပ်တို့ Subject ဖန်တီးပြဿနာတွေသတ်မှတ်ရာတွင်နှင့်နောက်သူတို့ကိုမေ့လျော့ဟန်ဆောင်၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုနှငျ့ကြှနျုပျတို့၏စိတ်ကူးယဉ်နယ်စပ်ခွဲခြားသောတိုင်ခြံစည်းရိုးမှပုံဖြစ်ကြောင်းဘယ်လိုဝေးပရော်ဖက်ရှင်နယ်အချိန်ကိုသိတော့မှ , သဘာဝအန္တရာယ်များဖြေရှင်းရန်နှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာမကြာခဏသိသိသာသာနဲ့ဣနြေ္ဒဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုလိုအပ်ကြောင်းထိုကဲ့သို့စိုးရိမ်ပူပန်မှုများဖြေရှင်းရန်ကြိုးပမ်းမယ်လို့သောအခါသူတို့ကိုမမြင်ရတဲ့သို့မဟုတ် grouper စေနဲ့သူတို့သညျ လာ. နည်းတူပျောက်ကွယ်သွားကြောင်းကျေနပ်စဉ်းစားတွေးခေါ်မှဝင်ရောက်ခြင်း မနေ့စဉ်ခံစားခဲ့ရကြောင်းအခွအေနေရှောင်ကြဉ်ပါကြောင်းယာယီရေရှည်မယူဆသည်အကောင်းဆုံးနောက်ဆုံးတော့ဖွယ်ရှိကျနော်တို့ကံကြမ္မာလျှင်ဥပဒေကြမ်းတွေးမိဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုအတင်းလိမ့်မယ်စိတ်ပိုင်းတစ်ခုအကုန်အကျလွန်သွားပါလိမ့်မယ်တဲ့နှောင့်နှေးအကျိုးသက်ရောက်မှုအကြောင်းမေ့လျော့ဖို့မရှေးခယျြမှုကိုဆိုလိုသည် ကအားလုံးကိုဖြစ်ပါတယ်။ သတိပြုရန်နှင့်အရေးပါအခြေအနေများနှင့်ပျက်စေဖြေရှင်းဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောထားတွေကိုသတိပြုမိလိမ့်ကျနော်တို့နေသောသိရန်မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်ကိုငါတို့သည်တုံ့ပြန်နိုင်ပုံကိုဝေး။
"တစ်ဦးချင်းစီအစဉ်အမြဲအနွယ်အားဖြင့်စုပ်ယူခံရရှောင်ရှားရန်ရုန်းကန်ခဲ့ရသည်။ သငျသညျကွိုးစားပါလျှင်, သင်မကြာခဏတစ်ဦးတည်းဖြစ်စေ, တခါတရံတွင်ကြောက်လန့်ပါလိမ့်မယ်။ သို့ရာတွင်အဘယ်သူမျှစျေးနှုန်း "မိမိကိုယ်ကိုဖြစ်ခြင်း၏အခွင့်ထူးဘို့လည်းမြင့်မားသည်။ Friedrich နစ်ရှေး
အခါ 19.40 နာရီတစ်ရက် 26 ဇွန်လ 2018, လေဆိပ် Punta ကာနဒီဆောငျးပါးကငါ OpenOffice စာရေးဆရာ၌ငါ့ laptop ကိုစာရေးနေပါတယ်။ တစ်အချက်မက်ဒရစ်အဘို့အ 20.15 ဇမှပျံသန်းမည်ဖြစ်ကြောင်းမဟုတ်, သည်အထိ အဆိုပါမမျှော်လင့်ဘဲနှောင့်နှေးပေးသော 22.45 တစ်ဦးထက်ပိုခရီးသည် unnerved သိရသည်။
လေကြောင်းလိုင်းများ၏ကောင်တာမှာနှေးကွေးမှုလုပ်ငန်းစဉ်နောက်မှငါထို့နောက် filter ကိုအားဖြင့်, ငါ၏အနည်းငယ်ဥစ်စကင်နာချော်ငါ့ဘော်ဒါ pass ရရှိပါသည်။ ထိုအခါသောငါ၏စာရွက်စာတမ်းဖြတ်သန်းပြီးနောက်, ငါ့ကိုရှည်ခရီးသွားဧည့်များအတွက်နေထိုင်ခွင့်ပါမစ်သက်သေတိုင်းပြည်အတွင်းဖြစ်ဘဲလျက်များအတွက် 2500 ပီဆိုပြစ်ဒဏ်ပေးချေရန်နောက်ထပ်တဲကိုသွားနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထိန်းချုပ်မှုမှာတာဝန်ရပ်နား, စေပြီ။ ငွေပေးချေမှု 52 အမေရိကန်ဒေါ်လာနှင့်ဖွဲ့ပြီးတာနဲ့ဆွဲဆောင်မှုအမျိုးသမီးရဲအရာရှိငါ escarapela မှုန်ဝါးဝိသေသလက္ခဏာနှင့်အတူမှောင်မိုက်လွင်ပြင်အဝတ်ဖို့လမ်းပေးစောင့်ခဲ့စဉ်းစားရန်အကျွန်ုပ်ကိုပို့ဆောင်တော်မူသောလက်, အလေးအနက်ထားနှင့်ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးငါ့ကိုမိတ်ဆက်ထမြောက်တော်မူခဲ့ပါသည် သူ့ရုံးခန်းလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတွက်တူညီသောအရာထို့နောက်တမင်တကာစုံလင်သော "ရှေ" ကိုဖတ်ရှုခြင်း, စီးပွားဖြစ်အသွားအလာထိခိုက်မယ့်ထောင့်မှအနားယူ, ငါ့အပြည့်အဝနာမအဘို့တောင်းဆိုနေတာက "dutyfree" မှတဆင့် run သောတူညီစင်္ကြံအားဖြင့်ငါ့ကိုဖို့ထပ်ခါတလဲလဲထားပြီးငါ့ကိုပြောပြရန် ငါ့ကိုဆက်သွယ်ကြောင်းတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးစာချွန်လွှာ ငါဝန်ခံချက်, မထုတ်ပစ်ခြင်း, ငြင်းပယ်ခံရသို့မဟုတ်ပြည်နှင်ဒဏ်အဘို့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေလည်းပါဝင်သည်သောဆုံးဖြတ်ချက်တောင်းဆိုခွင့်ရှိသည်ပါ၏မထီမဲ့မြင် (လုပ်နည်းကျွမ်းကျင်သူ) အတွက်ကြိုတင်ကာကွယ်ကျပ်ကိုင်မှုနှင့်အတူလိုအပ်ခဲ့လျှင်ငါဖောက်ဖျက်မှုအတွက်ငြင်းဆန်သူငါဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံဖို့အတွက်ပြန်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်လျှင်ပဏာမအဘို့အအယူခံလွှာတင်ရေး 60 ရက်ပေါင်းထက်လျော့နည်းခြင်းမရှိနှင့်အတူ, ကြိုတင်စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာဗီဇာကနေတဆင့်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ရှိပါလိမ့်မယ်ငါ့ကိုအကြောင်းကြားထားတဲ့အတွက်ပါလျှင် ကြှနျတေျာ့အိမျပွကောင်စစ်ဝန်ရုံးဖို့သံရုံးသို့မဟုတ်အနီးဆုံးကရေးသားသည် protocol ကို entries တွေကိုကာကွယ်ပေးသည်သောပညတျတရားကိုစဉ်းစားရန်ပျက်ကွက်ကတည်းကငါပြန်လာမယ့်လေယာဉ်ခရီးစဉ်ပေါ်မှာရှိသမျှကုန်ကျစရိတ်ခွင့်ပြုချက်ကိုပြန်ရအောင်တိုင်းပြည်ဝင်ခွင့်မရ ထဲမှာမြှုတ်ငါ့ပညတ် လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့်ဆုတ်ယုတ်မှု။ ကျွန်မဘာမျှမကလည်း, မဟုတ်သလိုငါတောင်ပြုံး sketched ပြီ, သတင်းငါ့ကိုလုံးဝချွတ်အနိမ့်နှင့် calzones စောင့်ရှောက်ဖမ်းမိထားပြီးအမြီးအမောက်နှင့် sarcasm နှင့်အတူထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။ ထိုအခါအချို့သောငါ့ကိုနှစ်ဆကိုသူဘာမျှနားလည်သဘောပေါက်ခဲ့သည်ဖြစ်စေကြောင်းဘာသာပြန်ဆိုနိုင်ကြည့်trasladándomeငါချွေးစေးနှင့် display ကိုကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းရမ်ဘာစီလိုစ်ကလောင်ထိပ်ပေါ်မှာအတူစက္ကူနှစ်ခုတဖက်သတ်များ၏တိကျမ်းစာ၌လာသည်အပိုင်းအစလက်ခံရရှိ၏အထောက်အထားအဖြစ်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့နှင့်ရပ်တန့်မထားပါဘူး .. နောက်ဆုံးတော့သူ့ကိုချဉ်းကပ်ကျွန်မရဲရှိတယျဆိုတာနိုင်သည့်ချက်ချင်းမျက်မှောက်ပြန် bolting မပါဘဲမယုံတစ်ထူးဆန်းတဲ့အသိနှင့်အတူလမ်းလျှောက်ဆက်လက်ဆုံးဖြတ်ခြင်း, သူဘာ Knights Templar ပစ်ချခံခဲ့ရသိမြင်ဖို့ "grassias" ပေးခြင်း ဦးထုပ်မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးနှင့်အခြားgrísမဲ့ရင်ဂယ့နှင့်အဝါရောင် folder ထဲမှာငါ့အ "ဆက်သွယ်ပြောဆို" ပေးသောစာရွက်စာတမ်းမိတ်ဆက်ပေးသည်။ ဒါဟာငါကနေစက္ကန့်ပြန်ငါကောင်းစွာရှိရာဖို့နဲ့ကိုယ့်ကိုကိုယ်နှင့်အတူငြိမ်းချမ်းရေးမှာရရန်အတောင်ပံအဖြတ်ခဲ့လူစုခွဲကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်ကြောင်းယခုအချိန်တွင်ဖြစ်ပါတယ်။ တိုတိုမှာတော့ကျွန်မအနေနဲ့လေ့လာသူသတင်းစာပညာကျော်ကြားမှုနှင့်ကိုယ်စားလှယ်အတွက်ရုံးချုပ်၏မျှော်မှန်းချက်နှင့်အတူ "ဘလော့ဂါ" သတင်းထောက်မှအနားယူခဲ့သည်။ ဒိုမီနီကာသူတို့နေဆဲကပ္ပတိန်မော်ဂန်၏သားစဉ်မြေးဆက်အသက်ရှင်နေထိုင်ရမည်ဖြစ်သည်ဘယ်မှာကျွန်းတစ်ကျွန်းပေါ်တွင် "ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမဟုတ်တဲ့ grata" စဉ်းစားရန်, ဖူး ဂျက် Sparrow အသက်အကြီးဆုံးပင်လယ်ဓားပြများ၏ Confraternity အိမ်ရှင်အဖြစ်ကြောင်း scoundrels နှင့်လူအပေါင်းတို့သည်လျှို့ဝှက်သဘောသဘာဝ။
တကယ်တော့ပြီးသားသွယ်ဝိုက်ပိုဆိုးတစ်ခုခုခရီးသွားလုပ်ငန်းစုပေါင်းရေရှည်အတွက်ကျိန်းသေနှုတ်ထွက်မဟုတ်၏အမှု၌ဖွစျနိုငျကွောငျး "ဟုအဆိုပါအသက်ဝိညာဉ်၏မိတ်ဆွေတစ်" ကသတိပေးခဲ့သည်ခဲ့သောကြောင့်, ရိုးရိုးသားသား, ငါ့ကိုဘာမှအားလုံး quizzical perafernalia မအံ့သြခဲ့သလဲ, ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးကြောင့်လုံလောက်သောမူးယစ်ဆေးထိုးဖြည့်ဆည်းဖို့မတော်တဆမှုကနေ အဝတ်အစားခပ်နွမ်းနွမ်းအရုပ်တွေနဲ့ကစားနေတဲ့အနက်ရောင်ဆံရှင်မနှင့်အတူအရွယ်မရောက်သေးသူ၏အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများငါ့ကိုအပြစ်တင်ခွင့်, la ဗစ်တိုးရီးယား၏ထောင်ထဲသို့ရဖို့တစ် mastiff ၏ embobado အနံ့, ဒီအဖြစ်အပျက်ဟာ၌ငါ့ကိုသည်သူ၏နှုတ်၌ဖြစ်သောဤကိုယ်တော်မြတ်မင်္သဟာယန့်ကိုထည့်သွင်းပါစေသကဲ့သို့အလင်းဖြစ်၏ ခွေးရူးပြန်ရောဂါ bloodhounds အပြည့်အဝခရစ်ယာန် sacristy, မကောင်းတဲ့ကလေးတွေကိုအဘို့တရားဟောအပြီးတွင်အဖြစ်ပုံငါ့ကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤနေရာတွင်ကြောင်းရည်ရွယ်ချက်ကိုကိစ္စရပ်များငါ့ကိုရေးလိုက်နဲ့ကျွန်မလုပ်ခဲ့တယ်လျှင်အများကြီးစာလုံးပေါင်းအမှားနှင့်အတူပါလိမ့်မယ်ထပ်မံလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိပါစာမတတ်အတွင်းပိုကောင်းပြုမူခဲ့ကတိပေး။
အတော်များများကကျွန်မအနေနဲ့, ထိခိုကျဒဏျရာမရှိဘဲလွတ်မြောက်ရန်နည်းလမ်းတွေရှာဖွေနေ, သတိလစ် chatting ပြီးနောက်ကိုယ်ခံစွမ်းအား, ပရောပရည်နဲ့ကျွန်မဟေတီနှင့်အတူနယ်စပ်ကိုဖြတ်ကျော်စဉ်ကတည်းကအမြဲတိတ်ဆိတ်အဆိုပါခေါင်းလောင်းဆွဲကြလိမ့်မယ်လို့တစ်ဦးတံခါးဝကတဆင့်ထွက်ပြေးလာ, ကျားများနှင့်နတ်ဆိုးတို့နှင့်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခဲ့ကြပြီဟုပြောပါလိမ့်မယ် ထိုသူတို့နှငျ့အတူသို့မဟုတ်နှစ်ဖက်စလုံးတွင်ကစားခဲ့သူဒိုမီနီကန်တားဆီးမရသည့် sniffing အနေနဲ့အရည်အချင်းမပြည့်၏စီမံခန့်ခွဲမှုစီရင်ချက်ကိုပယ်ထားတဲ့အပြစ်မဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဖြင့်သူ၏နှာခေါင်းကပ်ဖို့မသဘောတူညီချက်များရောက်ရှိနိုင်ဖြစ်ခြင်း, ဒီမှာနှင့်ထိုအရပ်၌ပုပ်အနံ့ခံနိုင် အစိုးရသို့မဟုတ် Trustees, နိုင်ငံရေးသမားများနှင့်postínနဲ့စပိန်ဟိုတယ်စက်မှုလုပ်ငန်း ပေး. တရားမျှတမှုမရှိတော့ကြောင်းဆိုပါသည်များ၏အလွဲသုံးစားမှု စစ်ရေးမြင့်မားသောအကျင့်ပျက်ခြစားမှုများအဆင့်, ဒါမှမဟုတ်လူထုအသိအမြင်မြှင်မတိုင်မီဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံနှင့်ဟေတီအကြားမဟာဗျူဟာမြောက်ကုမ္ပဏီနှစ်ခုမပေါင်း၏ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုမျှော်လင့်သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောကြောင့် Pedernales ထံမှ Montecristi မှပျောက်ကွယ်သွားသည်အထိကျုံ့ဖို့နယ်စပ်ကိုသွားခွင့်အဖြစ်အစားထိုးဖြေရှင်းနည်းများကိုရှာကွပါပွီ။ ထိုနောက်မှငါသည်ဒိုမီနီကန်အတိုက်အခံဒီကိစ္စကိုတက်ယူနှင့်စပိန်အတွက်အပူတပြင်းရည်ရွယ်ချက်နှင့်တကွ, ပါတီရဲ့မြေးဖြစ်သူ Trujillo အပါအဝင် filter နိုင်ပေမယ့်သောသတင်းအချက်အလက်များထောက်ခံ, စွပ်စွဲ Punta ကာန Group ကစီစဉ်ထား၏ထားပြီးတဲ့အခါမှာပစ်မှတ်ကိုထိပါပြီထင်တယ် အကျိုးစီးပွားနှင့်အမေရိကန်, ပြင်သစ်နှင့်ကနေဒါကနေပြင်ပလွှမ်းမိုးမှုများတားဆီးခိုလှုံရာတည်ငြိမ်မှုနှင့်သက်သေအမြတ်အစွန်းရှာကြသည့်မြို့တော်အတွင်းခရီးသွားဧရိယာ၌ယင်း၏ကဏ္ဍတိုးချဲ့ hegemony ကိုပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။
ငါနီးပါးအရုဏ်ပေါ်မှစောင့်ဆိုင်းနေသည့်အခန်းတစ်ခန်း၌ထိုင်ခြင်းနှင့်အရာပေါ်တွင်လေယာဉ်ပျံနဲ့ကျွန်မဘယ်တော့မှပြန်လာနိုင်ပါတယ်တာပါ။ ငါကိုငါသိ၏။ ထိုအခါငါ "ခြေထောက်" သင်ကနေနှင်ထုတ်ခံရတက်အဆုံးသတ်, အခါပျင်းနှုတ်ထွက်ကြောင်းဖွင့်သင်ညှို့ပေါ်မှာထိ မိ. လဲကြသောအခါသင်နှင့်သုံးရှာဖွေကြည့်ရှုကြပါတယ်-စတင်ပြန်လည်အရာ, ငါခုန်ကြိုးကဲ့သို့သောဂိမ်းကိုမလွန်ဆန်နိုင်ကြပြီကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်စတင်နှင့် သင်တစ်ဦးမြည်းအဖြစ်ကိုတက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ထားတဲ့လေးမှရှစ်ကစားသမားနှစ်သင်းအကြားလေ့ကျင့်ကြောင်းအခြားသားသမီးရဲ့ဖျော်ဖြေရေးဖြစ်ဆက်လက်သော churro တဝက်စွပ်အိတ်, mangotero, ချဉ်းကပ်နှင့်ပြီးခဲ့သည့်ဖြစ်ခြင်းများအတွက်ကျသွားတော့မှ စီးနင်းသောအနည်းငယ်သာကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ Dexter ယုံကြည်စိတ်ချရရွယ်တူ misunderstanding, နှင့်ရိုးရှင်းဘို့, ပေါ့ဆမှုဖွငျ့ဖွစျသညျ။
ဒီတော့ amorphous အသိနှင့်တာဝန်မရှိခြင်း, ငါသည်အရှည်လျားငါအချိန်ကန့်သတ်ခဲ့ကြပြီးငါသည်ငါ့နှင့်အတူရှိနေသောကြောင့်သတိမထားမိဘဲ, ပစ္စုပ္ပန်ဖြည့်ညှင်း၌သင်တို့ကိုရရှိထားသူသောအရာကိုခြေတစ်လှမ်းသောအခွင့်အလမ်း၏နောက်ကျောအပေါ်စီးကအကြံပြုခဲ့ကြ အထူးသဖြင့်, မိမိတိုင်းပြည်၏နာမည်ကောင်းထိခိုက်မည်သည့်နိုင်ငံခြားရောက်စွက်ဖက်တားဆီး, ကြိုး, သို့မဟုတ်အသေသတ်ခြင်းကိုခုခံကာကွယ်ဖို့တိုင်းပြည်၏သမာဓိသေချာနေသောသူတို့အဆွဲသူကိုဝှက်ထားလျက်ရှိသောပါးလွှာဝါယာကြိုးသည်းခံခြင်းတို့သည်ကျိုးပဲ့သောရူး ငါအမှန်တကယ်လမ်းအတွက်သရုပ်ပြလာတော့မှစဉ်းစားမိတယ်တဲ့ပဲ့သတိပေးချက်များကိုလျစ်လျူရှုအခါ။ ငါမသိသာသည်ငါ့ကိုနောက်တဖန်စတင်နိုင်ရန်အားဖြည့်လက်နက်တွေသို့မဟုတ်ကိုယ်ကျင့်တရားမရှိဘဲပြေးရန်သူဖြစ်ထောင်ချောက်မှတော်မှာရှိသည်ဟုငွေတံတားလက်လွတ်ချင်ကြပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာအနားယူရန်အချိန်ပါပဲ။
ဤတွင်ကျွန်မသည်အခြားရက်စက်စွာပတ်ဝန်းကျင်မှာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာ, အထီးကျန်နှလုံးသားများကိုလေ့လာပြီးနောက်ထူးဆန်းတဲ့ကမ်ဘာပျေါတှငျနထေိုငျ၏အတှေ့အကွုံရှိလိမ့်မည်နှင့်လုံးဝကြောင်းအနိုင်နိုင်နှစ်ဦးစလုံး, မရေရာသောအခြေအနေများအတွက်, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးထက်ပိုအဆင်ပြေနှင့်သာယာသောဘဝ၏ညာဘက်အရည်အသွေးကို၏အခြားမှန်ထဲမှာရှင်သန်ဆုတ်ယုတ်လာခဲ့သည် စိတ်ဓာတ်အစဉ်အမြဲအနက်ရောင်ကလေးများနှင့်လူဖြူနှစ်ဦးစလုံး featuring, ထိုကံမကောင်းစွာညွှန်ပြအတူသူတို့တစ်တွေဆုလာဘ်၏ဒဏ္ဍရီသို့မဟုတ်ဖြစ်လာဘယ်တော့မှလိမ့်မည်ဟုအိပ်မက်၏ရလဒ်အဖြစ်ဘာမှထက်ပိုတစ်ခုခုယူထက်အခြားဘာမှမစဉ်းစားကြဘူး အရောင်သူပုန်မှအမည်မသိစိတ်ရှည်ပူနွေးလာသည်ဖြစ်သောအခြားသူများကိုအနီရောင်-ပူဒယ်အိုးများ၏လက်ကိုင်မြိ်ု့ကြတဲ့အခြေအနေလွှမ်းမိုးနှင့်သင်လာသောလမ်းကိုပြန်သွားရ, မကင်းသောယုံကြည်သူတစ်ဦးအဖြစ်မှန်, ဒါမှမဟုတ်ထက်ပိုပြီးပျော်ရွှင်ခံစားရမနေ့က ယခုခွေးကိုအတုယူခံရ hort ဖြစ်လာသကဲ့သို့သငျ, ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်သင်၏ဖြစ်တည်မှု၏ဆုကြေးဇူးကိုအတင်းအကျပ်အဖြစ်မနေ့ကအတွက်ပြုစုပျိုးထောင်ရန်ပျက်ကွက်အရာကိုမပြုမီarrampiñar သူတို့မခေါ်လိုလျှင်မာရ်နတ်သည်ယေရှုကိုရွှံ့သူ့ရဲ့ခြေထောက်သို့မဟုတ်ခွကေိုအကြားသူ၏အမြီးသည်ဖုံးကွယ်ဖြစ်လာ elano ။
ဒါဟာငါဖွင့်ထားဝမ်းနည်းမှု exuding နှင့်မအံဆွဲ၌ငါ့မှတ်ဥာဏ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုချန်တုံ့လက်ခံသောဒီမိုကရေစီနှင့်မမှန်သောအနာဂတျအတှကျလူဆိတ်ညံလျက်ကာရစ်ဘီယံအာကာသ၏အုပ်ထိန်းသူများအဖြစ်ပြန်လာရန်အချိန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါတို့သည်သင်တို့မြေပေါ်တွင်ခြေမထားသောအခါဖွစျနိုငျသောအရာကိုမြင်ကြလိမ့်မည်, သို့သော်လေယာဉ်အိမ်မှာနီးပါးကိုးနာရီအကြာတွင်မနက်ဖြန်လိမ့်မည်, ပြတင်းပေါက်များနှင့်ရွံရှာနောက်ကွယ်မှစောင့်ဆိုင်းနေစေခြင်းငှါသောသူတို့အားငါ့အရိုအသေပြီးသည်မှနောက်သူတို့ကိုငါ့အနှုတ်ထွက်စာဆောင်ကြဉ်းမယ်လို့ နှင့်ငြင်းပယ်ခံရ ratting အဘို့အကြှနျုပျ၏ဘာသာရေးစစျပှဲ၌ငါ့ကိုမှားယွင်းတဲ့အသိအမှတျမ mortice ပတ်ရစ်ကြောင်းနှိမျ့ခခြွငျးအပေါငျးတို့သပုံစံများကနေထွက်ပြေးလာ, ဓါးတွေနဲ့ခုတ်နှင့်ဝေးဒိုမီနီကန်အနောက်နိုင်ငံတွေမှာငယ်ရွယ်လူရမ်းကားအသုံးပြုသောသံသံချေးတက် Revolver ဆန့်ကျင်ဖုံးကိုဓားရှည်ကို virtual စက္ကူပြင်းဆက်လက်လက်နက်ချ တစ်လအဘို့ကြိုးနှံစှာနထေိုငျသောသူတို့နှင့်အတူ 500 ပီဆိုတစ်ရက်, ဒါမှမဟုတ်€ 300 ရရှိရန်လိုအပ်ကြောင်းအားဖြင့်သွေးဆောင်သာအရာအားလုံးထက်စဉ်းစားခြင်းမရှိဘဲရှူတဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းရုံရေနံစိမ်း။
ဒီနှစ်တွေကြာပြီးတဲ့နောက်မှာသူတို့ရသောဒါကြောင့်နောက်ကျောအခြားကျွန်းအေးဆေးအတွက်ငါခိုလှုံရာကနေတောင်မှတစ်ဖိုင်ထဲမှာ anachronistic ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းနှင့်ထပ်ခါတလဲလဲခြိမ်းခြောက်ခြင်းမရှိဘဲစုန်းနှင့် remorseless အတိတ်၏အိပ်မက်, ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်အိပ်တစ်ဦးတည်းငါ့ကိုချန်ထားမည်မျှော်လင့်ပါတယ် ဟုတ်ပါတယ်သူ coiled နှင့်တထောင်နည်းလမ်းရှင်းပြီနှင့်အမြဲငြီးငွေ့စရာနှင့်နှေးကွေးချွတ်သှားသောအသက်တာ၏နောက်ဆုံးအမူအရာတို့သည်ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းအတွက်ခရီးသွားလာငါ့ကို facilitated သောသူတို့အားမျက်နှာသာကျေးဇူးတင်နှင့်မလွှဲမရှောင်ငါ့ကိုပြောနေသဖြင့်စတင်ခဲ့သည့်စွန့်စားမှုအရာကြွင်းလေ ငါသည်သင်တို့ကိုနေဆဲလျော့နည်းပုံမှန်မဟုတ်သောနည်းလမ်းတွေနဲ့ဝေးနည်းပါးလာအပင်များနှင့်စွန်ပလွံပင်များနှင့်နေဖြင့်အရတစ်ဦးမော်တော်ဆိုင်ကယ်၏နှစ်ခုဘီးတိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။
သူတို့ဟာ Boatman မဆိုအသေးစိတျပုန်းအောင်းစရာမလိုဘဲအမှန်တရားပြောနှင့်ပြီ။ ငါကအားလုံးပြောပါတယ်အများကြီးကြောင်း, ငါ့ဂုဏ်အသရေအပေါ်ကျိန်ဆိုနှင့်အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာ၏အခြားဘက်ခြမ်းကနေရွှေ့ဖို့ boatman တောင်းသောသူကျောင်းသားမှတင်စားမှုများကိုရည်ညွှန်းသည်, မိမိအတ္တအတွက်အသေသတ်ခြင်းကိုကျောက်ခဲနှင့်ပစ်ခံ၏အကျိုးဆက်များကိုခံစားနေရသူကိုရူပကတှေပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးမန်နီးဖက်စ် (ကာရစ်ဘီယန်) ကမြေထဲပင်လယ်ငှါ, လေယာဉ်တင်သင်္ဘောလှော်ခံနိုင်ရည်ရာမှလူတစ်ဦးသည်အောက်ပါဖြေဆိုခြင်း, သင်သုံးအကြွင်းမဲ့အာဏာနှင့်တာတော့သေချာတယ်အမှန်တရားတွေပြောပြရန်လျှောက်ထားသူကမေးတယ်:
တတိယ: သင်တို့ရှိသမျှသည်ငါကဲ့သို့သုံးဖြုန်းလျှင်ငါ့ကိုသင်ဒီမှာဘာလုပ်နေပါလဲ boatman ပြောပြ ?.
မည်သည့်စိတ်ကူးယဉ်၏ဤဝေးလံခေါင်သီသမိုင်းကနေကောက်ချက်ဆွဲပါ, လွတ်လပ်ခွင့်ဆုံးရှုံးကြောက်ရွံ့ခြင်း, ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်သည့်အခါလွယ်ကူသည်ကျိုးပဲ့သော, ထွက်ပြေးဖို့ချိသို့မဟုတ်မခံရပါက untenable ဖြစ်လာသည်နှင့်အထူးသဖြင့်အခါ boatman Charon မြစ်များနှင့်သမုဒ်အပေါ်စီးဒဏ္ဍာရီ, သင်နှောင်းပိုင်းကဘယ်နေရာမှာမဆိုနှင့်ဖြစ်ပျက်များအတွက်အနည်းငယ်သာ mortify နှင့်အတူဖြစ်ခြင်း၏စမ်းသပ်မှုဖြစ်လိမ့်မည်ဟုသောသငျသညျကိုသတိပွုမိခြင်းမရှိဘဲတဘက်ဖြုန်းဖို့မျက်စိပေါ်မှာအကြွေစေ့ထည့်ထားနိုင်ပါတယ်, ထိုလိမ့်မည်တစ်ခုခု သင်, အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်နှင့်တယောက်နောက်ဆုံးအကြိမ်စွန့်ခွာယူသောသူတို့၏အမျိုးအနှုတ်ခမ်းနှင့်ပါးမိတ်ဆွေများကို left ကြောင်းကို၎င်းအောက်မေ့တဲ့အခါမှာဆွဲဆောင်မှုများနှင့်နာကျင်စေသတည်း။
ကံမကောင်းpostulándomeအခြားမီးရှူးတိုင်မီးလောင်ရာအတူမမြင်ရတဲ့ loners Blog သို့နောက်တော်လိုက်ရန်အကျွန်ုပ်ကိုအတင်းအကျပ်, ငါ၏ဦးခေါင်း၌ firebrands အဖြစ် recreated နှင့်ထောက်ခံမှုမှမီးခိုးကြသောအခါငါမဟုတ်ရင်မပွုနိုငျသောကွောငျ့ဝမ်းနည်းပါတယ်, ကမျြးစာလာသဝန်ခံဖြစ်ပါသည် ကျောင်းသားများ၏သတိပေးချက် Charon တစ်ဦးလိုသောဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုနှင့်အတူ: သင်ကဒီမှာဘာလုပ်နေကြ ?. အဘယ်အရာကိုငါတို့သည်¿မြေပေါ်တွင်နခွေဒါမှမဟုတ်အာရုံအခြားအဓိပ္ပာယ်ကိုနှင့် boatman သူ့မျက်စိထဲမှာအချည်းနှီးနှစ်ဦးကိုငွေကြေးတည်းခိုကြောင်းကြိုမြင်နိုင်ဖို့လာမယ့်ဖြစ်ခြင်းကိုကြောက်ဖြစ်ပါတယ်ရှိသည်ဘယ်မှာမရဏာနိုင်ငံမှသွားလာဆက်လက်ပါဘူး ?.
"ဒါကြောင့်သင့်ပါတယ်အဖြစ်သူ့ကိုသင်ခန်းစာသစ္စာဖောက်သင်ပေးမဟုတ်နေစဉ်, ကောင်းသောနဲ့စစ်မှန်တဲ့ဒိုမီနီကန်သူတို့ရဲ့ပရိယာမှသားကောင်လဲကြလိမ့်မည်။ "
Juan Pablo ဒွါတဲ, ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံကိုတည်ထောင်သူဖြစ်သည်။
Belz, ဖြစ်ကောင်းသည်သူ၏ဂုဏ်အသရေ၏လမ်းကြောင်းထွက်ခွာနှုတ်ဆက်ပြောပါတယ်သောသူသည်လက်ရှိ "ဘလော့ဂါ" ။
ပီ Davidsen သူ says:
28, ဇွန်လ 2018 မှ 13: 48
che ဂွေဗားရား Belz: ကိုလည်းမိခင်တိုင်းပြည်အတွင်းနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်ကိစ္စများ, နိုင်ငံရေးသမားများနှင့်ဖြိုချကူညီရန်ခိုကိုးရာမဲ့ရှိပါတယ် ... "ငါကလည်း"!
ဟိုဆေး Sanz သူ says:
30, ဇွန်လ 2018 မှ 21: 42
ဘယ်နေရာမှာဦးဆောင်လမ်းပြကြောင်းလမ်းများရှိပါတယ်သကဲ့သို့ဖွင့်လှစ်မ key ကိုသော့ခလောက်လည်းရှိထားပါတယ် !!!
နှင့်အညီ, နောက်ပြန်ရင်ဆိုင်ရသောဤဘဝ, (ပထမဦးဆုံးကျနော်တို့ပိုမိုမြင့်မားပြီးတော့နုပျိုဖြစ်သင့်) တွင်မှာအားလုံးထွက်ကိုပြင်းထန်စွာဝေဖန်ဖို့ ... အနှစ်အသင်လူငယ်ပေးသည်သောအစှမျးသတ်တိနှငျ့ drive ကိုပေးရမည်သောဉာဏျပညာနှငျ့အတှေ့အကွုံကနေဖြေရှင်းရန် နှင့်ကျော်လွန်ပြီး !!!
¿ Puede ser Marc-Aurel Bonne-année el interlocutor válido y hombre de Estado que salveaHaití de la bancarrota ? 23 ဖေဖော်ဝါရီလ 2019
17 အောက်တိုဘာလ, 2017 0
သင့်ရဲ့အချိန်ဖြုန်းနှင့်အခြားသူများမပြုစေခြင်းငှါ AS ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောဒါဒီartículoTweetPONTEတစ်ခတ်မှာပန်းပွင့်နှင့်သင့် ONE ARO မျှဝေပါ။ ထိုအပျောက်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုမေ့လျော့မပေးပါဘူး [ ... ]
16 ဇူလိုင်လ 2018 0
artículoTweetElဂျီဘရောလ်က "မကောင်းတဲ့" incomprehensibly မြေပြင်ကမ်းခြေမှာရဖို့ဆက်လက်ဘယ်မှာစစ်တိုက် .. ဖြစ်လာသည်ဒီလယ်ကိုမျှဝေပါ။ က "ပြည်တွင်းရေး" အကြမ်းဖက်ဝါဒမရှိတော့သဖြင့်တစ်ဦးစိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်တယ်ဆိုရင် [ ... ]